Asief 2019: hiditra an-tsehatra ny atletisma, anio | NewsMada
Asief 2019: hiditra an-tsehatra ny atletisma, anio
Ny lalao fifanintsanana teo amin’ny taranja iraisana, toy ny basikety sy ny volley ary ny baolina kitra no nisantarana ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, ny fanatanjahantena ho an’ny mpiasam-panjakana, taom-pilalaovana 2019, tany amin’ny faritra Antsiranana. Anio kosa no hiditra an-tsehatra ny taranja atletisma. Nahatonga solontena avokoa ny avy eny anivon’ny minisitera tsirairay sy ny toeram-piasana mifandraika aminy avy ka mitotaly 8000 eo ny isan’ireo mpilalao rehetra, amin’ny taranja rehetra.
Araka ny fandaharam-potoana, nanomboka ny alatsinainy teo ary haharitra hatramin’ny rahampitso 11 oktobra ny lalao fifanintsanana, amin’ny taranja rehetra, hisy ny alim-pandihizana, ny 11 oktobra alina ary ny 12 oktobra kosa ny lanonam-panokafana ity fifaninanan’ny Asief (Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires) ity. Hitohy ny 13 oktobra kosa ny fifaninanana ka ny dingana famaranana no hotanterahina hatramin’ny faha-20 oktobra, amin’io ihany koa no hanaovana ny lanonana famaranana ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara Asief ity. Eo am-piandrasana izany, toy izao ny voka-dalao ho an’ny baolina kitra omaly, “Foot jeune”: Mmrs Tana-sante Tamatave(0-2),msp -fop Tana(2-0), Mixte Mdn Tana-3FB Boeny(1-3) Sante Tana-sante Tamatave(2-1) Drap Diego-mjs Tana(0-2).
Nambaran’ny mpitantana ny Asief, Andrianarison Jean Aimé na i John Love, fa natao indrindra ho fampiraisana sy fampiombonana ny mpiasam-panjakana ity fifaninanana ity ary hanentanana ireo mpiasa variana any anaty birao, mba hanao fanatanjahantena. Tsy nanadino ny nisaotra ny fitondrana sy ny Minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ireo, tamin’ny fanampiana sy tolo-tanana.